Kiiskii ugu horeeyay ee xanuunka Coronavirus oo la xaqiijiyay gudaha Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaKiiskii ugu horeeyay ee xanuunka Coronavirus oo la xaqiijiyay gudaha Soomaaliya
March 16, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kiiskii ugu horeeyay ee xanuunka Coronavirus ayaa la xaqiijiyay gudaha Soomaaliya, sida ay sheegtay wasiiradda caafimaadka Fowsiya Abuukar.
Qofka xauunka laga helay ayaa dhawaan kasoo laabtay dibada, waxaana hadda lagu hayaa meel gooni ah, wasiiradda ayaa intaas ku dartay.
Dhammaan duulimaadyada dalka dibadiisa ka imaanaya ayaa sidoo kale la xanibay laga bilaabo 18-ka Maarso si looga hortago xanuunka Coronavirus, sida uu sheegay wasiirka duulista Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Salaad.
Shirka wadatashiga Puntland oo galay maalintiisii labaad
Ciidamada ammaanka Puntland oo howlgal ka bilaabay gudaha magaalada Gaalkacyo
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Ciidamada ammaanka Puntland ayaa gudaha magaalada Gaalkayo ka bilaabay howlgalo ujeedkoodu yahay ugaarsiga xubnaha argagixisada ah ee xiriirka la leh maleeshiyada Al-Shabaab, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka ammaanka ah. Intii uu socday howlgalku, [...]
Madaxweynah DFS Xasan Shiikh Maxamuud oo ka codsaday shacabka Muqdisho in ay ka qayb qaataan adkaynta amaanka iyadoo uu soo aadanyahay shir-weynaha IGAD
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa ka hadlay tallaabooyin amniga lagu sugayo oo ay qaadeen haayadaha amaanka iyadoo amaanka Muqdisho aad loo adkeeyay. Xasan Shiikh ayaa dadka shacabka ah ka codsaday [...]
Galkayo-(Puntland Mirror) At least two of Somali national army who appeared the battle between Puntland forces and Galmudug militants in Galkayo, have laid down their weapon and surrendered themselves to the Puntland government, according to [...]